Azia Atsimo · Marsa, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsimo · Marsa, 2018
Tantara mikasika ny Azia Atsimo tamin'ny Marsa, 2018
Bangladesh 30 Marsa 2018
Pakistana 27 Marsa 2018
Sri Lanka 26 Marsa 2018
Nahakasika olona maro ny fahafatesan'i Arthur C. Clarke (1917 - 2008) - misy ireo tena mpankafy tantara foronina momba ny siansa (science fiction), ary ao koa ireo hafa izay nahafantatra azy fahavelony namoaka tanaty blaogy ny fahitàny ilay rangahy. Manomboka amin'ny fomba fijery tsotsotra ka hatramin'ny adihevitra hafahafa, tena tsaroan'ireo blaogera Sri Lanke i Clarke amin'ny fananany fijery lavitra sy fanofisana ny hoavy. Nifindra tao Sri Lanka ny taona 1956 io mpanoratra Britanika io ary nanori-ponenana tao mihitsy.
India : Tibet Sy Ny Afo Olympika
India 18 Marsa 2018
Toy ny hoe tsy mety hiala ao an-tsain'ny olona izany ny momba an'i Tibet. Tibet no mbola lohahevitra mibahana indrindra amin'ny adihevitra sy nahangona fanohanana maro avy amin'ny vahoaka, indrindra fa anaty aterneto ao India.
Bangladesh 18 Marsa 2018
Pikantsary Ara-Kolontsaina Laharana faha-6 : Voninahitra
Amerika Avaratra 16 Marsa 2018
Inona no tonga ao an-tsainao voalohany raha vao maheno ny teny hoe voninahitra? Jery todika amin'ny haino aman-jery amerikana sy pakistaney
Nepal 16 Marsa 2018